ကိုယ့်ဖိနပ်က ကိုယ့်ထက်လမ်းကပိုမြင်တယ် | PoemsCorner
မိုးရေတွေထဲမှာလူကိုထားခဲ့ပြီး စိတ်က Asahiနဲ့
လူက အိမ်နံပါတ်မမှတ်မိ စိတ်က ခပ်တည်တည် အိမ်ထဲဝင်သွား
လူက ခုထိနို့နံ့ မစင်သေးဘူး စိတ်က ကိုယ့်မျိုးဆက်အတွက် စဉ်းစားတယ်
သူက လွဲရင်ဘာဆို ဘာမှ မလိုဘူး လိုလို
အခု……… ဘုရားသခင်သန်းခြောက်ဆယ် လိုတယ်………….
လူက စီးရမယ့်နံပါတ် မေ့နေတုန်းပဲ
“မိုး”အကြောင်းကဗျာတွေ ရေးနေလောက်ရောပေါ့။ ။
In: ကဗျာ Posted By: Su Taryar Lwin Date: Jul 29, 2013
Leave comment7Comments & 488 views
By: May Kha at Jul 29, 2013
အောက်ဆုံးပိုဒ်ကလွဲရင် အကုန်ကြိုက်တယ်ဗျာ။ =)
By: chiron at Jul 29, 2013
By: loafer at Jul 30, 2013
By: Khine lay at Aug 4, 2013
By: Kathy at Aug 4, 2013
ဆုလေး . . ရှင် . . စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကို မှားရွေးမိထားတယ်နော် . . ဒီကဗျာပိုင်ရှင်က ဆုတာရာလွင် @ ပန်ပါယ် ပါ ။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကဗျာမဟုတ်ပါဘူး . . သူက သူ့နာမည်မရွေးဘဲ မှားရွေးမိတာပါ မခိုင်လေး @ Kathy
By: မိငြိဏ်းခက် at Aug 4, 2013
ဟုတ် အမရေ တာရာမှားရွေးမိတာ ….
By: Su Taryar Lwin at Aug 11, 2013